Göteborg oo la doonayo in laga hirgeliyo xerro geela lugu hayo oo loo soo daawasho tago | Somaliska
Göteborg oo la doonayo in laga hirgeliyo xerro geela lugu hayo oo loo soo daawasho tago
Magaaladda Göteborg ee caasimadda labaad ee Iswiidhan ayaa waxaa ka socda qorshe lugu doonayo in laga sameeyo xerro lugu hayo geeela loona soo daawasho tago si ay u soo jiitaan indhaha dalxiisayaasha caalamka. In ka badan hal malyan ayaa dowladda ku bixisay taabo gelinta mashruucaas , hase ahaate aan weli si rasmi ah u taabo gelin daruufo ku gadaaman awgeed.
Ninka lugu magacaabo Géza Nagy oo ah ninka howshaan bilaabay, ayaa isagoo u waramaya wargeyska Göteborgs Posten ayaa sheegay in qorshaha howshan muddo dheer ka soo shaqeeynayey. Wuxuu sidoo kale sheegay in la sameeynayo xarrun laga dhiso xagga dambe ee egaroonka lugu ciyaaro ee Angereds arena. Taas oo ay dadku suuragal u noqoneeyso ineey u soo daawasho tagaan.
“Daqliga ugu weyn waxaa uu ka imanaya dalxiisayaasha, waxaa jira xiiso weeyn oo geela dalka dibadiisa iyo dibadiisa loo qabo. Waxaan ku xisaabtameeyna ineey dalxiisayaal kala duwan ay caalamka dacaladiisa nooga imanayaan sida Shiinaha iyo Jabaan” ayuu yiri ninka mashruucan wada qorshihiisa ee Géza Nagy oo misna hadalkiisa sii daba dhigay in shirkadaha waa weeyn ee caanka ah sida Volvo ay imaan karaan xarrunta geelaasi oo ay muuqaalo ka sameeynsan karaan wax soo saarkooda.
“Siyaasiinta oo talaabo wanaagsan u arka”
Dhinaca kale Géza Nagy wuxuu tilmaamay in dad gaaraya labaataneeyo qof lugu shaqaaleeyn doona. Ujeedada mashruucan ayuu ku sheegay ineey qeyb ka ahaan doonto is dhex galka iyo suuqa abuurid.
“Siyaasiinta waxaa ay u arkaan arrin wanaagsan. Waxeey aaminsan yihiin hindisaheena aan ku dooneyno inaan xaafadda Angered ka dhigno goob dalxiis” ayuu yiri Géza Nagy oo sharaxaya sida mashruucan u dhaqan geli karo waxna uga badali karro xaafadda Angered oo ah xaafad ay ku badan yihiin soomaalida iyo dadyowga kale. Bishii oktoobar ee sanadkii 2015-kii ayaa la soo bandhigay qorsha sameeynta xarruntaasi geela, waxaana ay u muuqataa mid ka heshay taageero maamulka gobolka Göteborg, suuqa shaqada iyo maamulka goboladda Galbeed. Muddo gaabana waxaa gobolka maamulka gobolka Göteborg kor kordhiyey adduun gaaraya 500.000 kr taas oo ugu talagalay xagga is dhexgalka. Iyadoo ay misna jiraan da daal badan uu Géza Nagy ku doonayo inuu helo dhaqaale kale oo lugu fan gareeyo ayuu hadana sheegay qalabteeynta xarruntu geela ku kaceeyso lacag gaareeysa labbo malyan oo lacagta karoonka ah.,
Caanaha Geela ma u daawo baa cudurka autism ama dhakaakaha?
Malin Larsson, waa xildhibaanad ka tirsal golaha deegaanka ee degmada Skara ee xisbiga Deegaanka, waxeey xubin ka ah ururka la yiraahdo Kamelförening oo ah ururu ay leeyihiin koox ku howlan howlaha geela, ayey dowladda ku maal galisay daraasad ay ku dooneeyso ineey ku ogaato faa’iidada u leeyahay geela caanahiisa. Waxaa ay sheegtay in caanaha geela macaan yahay luguna tijaabiyey carruuraha qaba dhakaakadaa ayna muujisay ineey macaan sadeen cabidiisa.
Ugu dambeyntiina ´waxaa Nagy iyo kooxdiisa ay wadaa da daalo ay ku doonayaan in xaafadda Angered laga sameeyo xarrun geela lugu hayo loona soo daawasho tago. Taas oo aan la ogeyn sida ay suuragal ku noqon karto taabo gelinteeda. Hase ahaatee la bilaabay dhisida qeybo ka mid ah.
Qoraaladeenna soo socda ayaa haddii Alla idmo waxaan ku eegi doonaa sida ay soomaalida Göteborg u arkaan arirnkaasi. Maadama soomaalida lugu tiriyo dad xoolaha dhaqata ah oo reer guuraa ah.
Xaafadaha Soomaalida ee Stockholm (Sawiro)